September 12, 2020 - Hargeele - Wararka Somali State
Africa in the news: Sudan peace deal, Ethiopia elections, and Eastern and Southern Africa updates – Brookings Institution
Ethiopia News September 12, 2020
Africa in the news: Sudan peace deal, Ethiopia elections, and Eastern and Southern Africa updates Brookings InstitutionSii akhriso
Muxuu ka yiri Mohamed Salah kaddib saddeleydii uu ka dhaliyay Leeds United??
Cayaaraha September 12, 2020
(Liverpool) 12 Sebt 2020. Xiddiga reer Masar iyo kooxda Liverpool ee Mohamed Salah ayaa ka hadlay guushii ay ka gaareen naadiga Leeds United, taasoo ay kaga furteen kal ciyaareedkan 2020-21 ee horyaalka Premier League. Liverpool ayaa guul dirqi ah kaga gaartay kooxda Leeds United garoonka Anfield, kulankeeda ugu horeeyay horyaalka Premier League kal ciyaareedkan Sii akhriso
Liverpool oo guul dirqi ah kaga gaartay kooxda Leeds United garoonka Anfield… +SAWIRRO
(Liverpool) 12 Sebt 2020. Liverpool ayaa guul dirqi ah kaga gaartay kooxda Leeds United garoonka Anfield, kulankeeda ugu horeeyay horyaalka Premier League kal ciyaareedkan 2020-21, kaddib markii ay kaga adkaatay 4-3. Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala maray 3-2 ay ku hoggaamineysay kooxda martida loo ahaa ee Liverpool. Daqiiqadii 4-aad ee ciyaarta kooxda Liverpool Sii akhriso
Xeer-ilaaliyaha guud ee Qaranka oo daahfuray waraaqdda qiimaynta Caafimaadka
Soomaaliya September 12, 2020
Muqdisho (SONNA)- Xafiiska Xeer-ilaaliyaha guud ee Qaranka ayaa dib u casriyeen ku sameeyay xaashida dhaqtarka ee dhaawac Muujinta, taaso xoojinaysa danbi-oogista, danbi barista iyo cilmiga forensikada ee dhibanayaasha loo gaystay xad-gudubyada ku saabsan Jinsiga. Xeer-ilaaliyaha guud ee Qaranka Dr Sulaymaan Maxamed Maxamuud oo daahfuray hirgalinta waraaqda qiimaynta Sii akhriso
Golaha shacabka oo akhrinta 2-aad marsiiyay Hindise sharciyeedka Hay’adda Socdaalka “SAWIRRO”
Muqdisho (SONNA)- Kulanka mudanayaasha golaha oo uu shir Guddoominayey Guddoomiyaha Golaha Shacabka Mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan waxa ay mudanayaashu akhrinta 2-aad Marsiiyeen Hindise sharciyeedka Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda Soomaaliyeed, waxaana qodobada sharcigan fikradahooda ka dhiibtay qaar ka mid mudanayaasha golaha shacabka. Guddoomiye Sii akhriso
Taliska Booliska Soomaaliyeed oo ka hadlay Kiiska Gabar lagu dilay degmada Waabari
Muqdisho.(SONNA):- Taliska Ciidanka Booliska Soomaaliyeed ayaa faah faahin ka bixiyay kiiska gabar shalay lagu dilay Degmada Waabari ee Gobolka Banaadir. Qoraal ka soo baxay taliska ciidanka booliska ayaa lagu cadeeyay inay jirto falka dilka ah ee loo geystay gabar da’yar oo ka mid ahayd ardaydii dhawaan galay imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiga sare, kuna baastay, Sii akhriso
Shaxda rasmiga Kooxaha Liverpool iyo Leeds United ee horyaalka Premier League oo la shaaciyey
(Liverpool) 12 Sebt 2020. Waxaa la shaaciyey safafka rasmiga ee ay garoonka ku soo geli doonaan kooxaha Liverpool iyo Leeds United ee horyaalka Premier League. Liverpool oo doonaysa inay difaacato horyaalka Premier League si wada jir ah safkeeda hore ugu soo wada bilowday caawa Mane, Salah, Firmino iyo xitaa Keita. SAFAFKA RASMIGA EE LABADA KOOXOOD HALKAAN […]Sii akhriso
RASMI: Kooxda Barcelona oo shaacisay Magacyada Afarteeda Kabtan ee xilli ciyaareedkan cusub
(Barcelona) 12 Sebt 2020. Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa shaacisay magacyada afarteeda kabtan ee kooxda hoggaamin doona xilli ciyaareedkan cusub. Barcelona waxa ay xaqiijisay in Messi, Busquets, Pique & Roberto ay yihiin kabtannadeeda xilli ciyaareedkan cusub. Xiddiga reer Argentine ee Lionel Messi ayaa loo codeeyey inuu yahay Kabtanka koowaad ee kooxda, Sii akhriso
Waa kuwee labada xiddig ka tirsan Kooxda Arsenal kuwaasoo isku dhacay ka hor kulankii ay galabta ka adkaadeen Fulham?
(London) 12 Sebt 2020. Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa guul ku furatay horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan, kaddib markii ay 3-0 uga adkaadeen naadiga ay isku magaalada ka dhisan yihiin ee Fulham. Yeelkeede, waxaa la soo warinayaa in ka hor kulankaas ay isku dhaceen labo ka mid ah xiddigaha kooxda Gunners. Warbaahinta Ingiriiska ayaa baahisay in […]Sii akhriso
Miralem Pjanic oo farriin u soo diray Taageerayaasha Kooxdiisa cusub ee Barcelona… (Muxuu yiri?)
(Barcelona) 12 Sebt 2020. Miralem Pjanic ayaa beegsaday warbaahinta xiriirka bulshada ee dhinaca Internet-ka si uu ula wadaago Taageerayaasha farxaddiisa ugu dambeyn inuu shaqo ka helo Kooxda Barcelona, wuxuu u arkaa sharaf inuu xirto maaliyadda kooxdiisa cusub. “Cidna weligeed xusuustaada kaama qaadan karto, laakiin tani waa bilow cusub iyo sheeko cusub oo Sii akhriso